ညီလင်းသစ်: စနေနေ့ ညစာ
Posted by ညီလင်းသစ် au 29.3.11
ဟားဟား အစ်ကို ညီလင်းတို့တော့ ဟင်းချက်တဲ့ ဘလောခ့်တွေကို အားကျလို့ လိုက်ချက်နေတာပေါ့။ ဟင်းချက်တာရော ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုရော ကြည့်ရတာ အစ်ကိုက တော်တော် စနစ်တကျ လုပ်တတ်ပုံရတယ်။ နံပါတ် ၁ အနေနဲ့ ကွန့်မန့် ပေးလို့ ဟင်းခွက်တွေ အနားရောက်လာရင် ကောင်းမှာ... ဂလု.. :-)
အဲဒီဟင်းတွေအားလုံး မအိမ်သူ ရော စားလားး)
မြင်းခွာရွက်သုတ် ကို ပိုစားချင်တယ် ဒီမှာဝယ်မရလို့ ငတ်နေတာကြာပြီ ဗျို့  )) ဗီယက်နမ်ဆိုင် တဆိုင်ရှိရင် ဗမာဟင်းချက်ပြုတ်ရ အဆင်ပြေသပေါ့ ..
ကိုညီလင်းသစ်က ဓာတ်ပုံအရိုက်ကောင်းသလို ဟင်းချက်လည်းကောင်းပေတာကိုး
ပုဇွန်ဆီပြန်များ အိနေတာဘဲ အနားသာရှိရင်နှိုက်စားမိမယ် ထင်တယ်...း)
ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ ဘက်ဂရောင်း ကာလာလေးကလည်း လှလိုက်တာ
ပုံတွေကြည့်ပြီး စဉ်းစားနေတာ ကျွန်မဟင်းချက်တာ ကိုညီလင်းသစ်လက်ရာကို မှီပါ့မလား လို့ ...
ထမင်းဘယ်နှပန်းကန် ကုန်သွားလဲ ဒီဟင်းတွေနဲ့း)
ကိုယ်တောင် ကျွတ်သွားပြီ ဟင်းချက်ပြီးမတင်ရဲတော့ဖူး
နုတ်နေတာပဲ ပုဇွန်ဟင်းကလည်းရှယ်၊ ကစွန်းရွက်ကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့
ဟိုတလောက သုတ်စားတာ အပင်လိုက်နှီးနီး
Wow, Ur cooking skill very good,
Your wife and son like to eat?
ဈေးဝယ်ရတာ ခေါင်းအစားဆုံးပဲ ။ ယောကျာ်းလေးဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ ။
ဟင်းတွေကို စုံနေတာပဲ။ မြင်းခွာရွက်သုတ်လေး စိတ်ရှည်လက်ရှည် နဲ့ ကို ပါးပါးလှီးထားတာပဲ ။
ဟင်းတွေ အားလုံး အစပ်အဟပ်ကလည်း တည့်လိုက်တာ။
ဟင်းတွေကြည့်ပြီး ဗိုက်တောင် စာသွားပြီ။
Bravo! Je dois admettre que ta cuisine est meilleure que le mien!!!
မြင်းခွါရွက်သုတ်က“ရိတ်ရိတ်ပါအောင်လှီး ”တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ဒါကိုပြောတာပဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်။
ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပုဇွန်ဟင်းဓါတ်ပုံက စာမဖတ်ခင်မျက်စိထဲတန်းဝင်လာတော့ အော် အပြင်ဆိုင်သွားစားတာလို့ ထင်မိတာ။ ဓါတ်ပုံပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ စာရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဟင်းချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် presentation သိပ်ကောင်းတာပဲ။
အစ်ကိုလည်း ဆြာကြီးပဲး) ဟင်းတွေက သန့်ပြီး စားချင်စရာတွေ မြင်းခွက်ရွက်သုတ်ကြိုက်တယ် ။
rose of sharn said...
တယ်ဟုတ်ပါလား... :) ... စားချင်စရာတွေချည်းဘဲ
ကန်စွန်းရွက်ကြော်နဲ့မုန်ညင်းဟင်းချိုပိုကြိုက်လို့ အဲဒါပဲ အရင်စားထားလိုက်မယ် :)
ဒီဟင်းတွေက မအိမ်သူလည်း စားလို့ရတဲ့ ဟင်းမျိုးတွေပဲနော်။
ဟင်းတွေကြည့်ရတာ မြင်ရုံနဲ့တင် ကောင်းနေမှန်းသိသာပါတယ်။ အိမ်သူပါ စားလို့အဆင်ပြေအောင်ချက်ထားပုံရတယ်။ သူတို့ဆလပ်သုတ်တဲ့ပုံမျိုး သုတ်ထားတယ်ထင်တယ်။ စားပြီးတော့ ဘာမှတ်ချက်ပေးလဲဆိုတာ ရေးပေးပါအုံး။
ဟင်းချက်ပို့စ်တွေ ပုံနှင့်တကွ ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ဦးမှပါ...
ဒီလို အကျောပေးလို့တော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ...:D
စားချင်စိတ် ဖြစ်မိသွားတယ် ..
ကန်ဇွန်းရွက်ကြော် အကောင်းဆုံးပဲဗျို့...ကျန်တာကိုတော့ လေး၊ ငါး၊ ရှစ်ဇွန်းလောက်ပဲ နှိုက်သွားတယ်။ ကျန်းမာရွှင်လန်း အေးချမ်းပါစေ...
Whatalucky Ma Eain Thu!You proved what i said she doesn't need any diamond more.Already got really priceless:))When i try horseshoe leave salad next time,i'll try to mince like you.Love to eat it:)
ဟင်းတွေ အားလုံး ရှယ်တွေပါလား.. နည်းနည်းစီလောက် မြည်းသွားမယ်နော်.. :)
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ဟင်းနံ့တွေ မွှေးနေတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေကို လည်တာများသွားလို့ အားကျတာနဲ့ ၊ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် လည်း စားရမှာ မဟုတ်ဘူးလေ...၊း)
မှန်တာပေါ့ဗျာ၊ တကယ်ဆို အဲဒီလို ချက်သင့်တာပေါ့၊ ကျနော်က အပျင်းကြီးနေခဲ့တာ...၊း)
ဟုတ်ကဲ့, စားပါတယ်၊ မြင်းခွာရွက်သုပ်ကို ကျနော်လည်း တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျ..။
အာ...ကျနော်က တတ်သလောက်၊ မှတ်သလောက် ပါဗျာ၊ ဒီဓါတ်ပုံတွေ မတင်ခင် နောက်ခံ ဘက်ဂရောင်း အစိမ်းကို မြင်တော့ “အင်း..အစိမ်းရောင် လွင်ပြင် ပိုင်ရှင်တော့ ကြိုက်မှာသေချာတယ်” လို့တောင် တွေးမိသေးတယ်၊ ထမင်းကတော့ ၃ ပန်းကန်...၊း)
ဟာ...အဲဒီလိုတော့ မနောက်ကြေးလေ၊ ကျနော်က မဘေဘီတို့ဆီကနေ အာရုံခံစားပြီး လိုက်ချက်နေရတာ၊
ဘာမှ အားမငယ်နဲ့၊ ကျနော်လည်း အဲဒီလိုပဲ အမြဲတမ်း အပင်လိုက် သုပ်နေတာ၊ ဟိုတလောကမှ အမေပြသွား လို့ နဲနဲ လှီးတတ်သွားတာ...၊း)
Thank you. Yes..they did like.
လာလည်တာရော ကွန်မန့်အတွက်ပါ ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ဈေးဝယ်ရတာတော့ တကယ် ခေါင်းစား တယ်၊
Hmm...c'est gentil à toi mais je suis certain que la tienne est aussi bonne, sans doute. :)
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ အင်း..ရိတ်ရိတ်ပါအောင်လှီးတာက တော့ မီးဖိုချောင်စုန်း ပြုစားလိုက်လို့ နေပါလိမ့်မယ်...၊း)
အထင်မကြီးနဲ့ ညီရေ့...၊ နောက်ထပ် ၃ ခွက်လောက် ထပ်ချက်ပြီးရင် ကျနော်ချက်တတ်တာ ကုန်ပြီ...ဟားဟား၊
ကြိုက်တာသာ သုံးဆောင်ပါဗျာ၊ Guten Appetit..!
ဒီလိုပဲ လျှောက်လုပ်ကြည့်တာပါ ညီမရေ....၊ အထူးအထွေ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ..၊
ကျေးဇူးပဲဗျို့၊ ဟုတ်တယ်ဗျ..တခါတလေတော့လည်း ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ၊ ပျားလဲစွဲသာ ပေါ့ဗျာ၊ မှတ်ချက်ကတော့ အထူးအထွေ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ကောင်းတယ်ပေါ့၊ အင်း..ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း တခြား စားစရာလည်း မရှိပါဘူး၊ သားကတော့ မြင်းခွာရွက်သုပ် ကို အတော်လေး ကြိုက်တယ်၊
တိမ်ပေါ်ထိ လိုက်တော့မယ်ပေါ့...ဟုတ်လား၊း)
ဟုတ်တယ်၊ မြင်းခွာရွက်က ဆေးဖက်လည်း ဝင်တော့ ကောင်းတယ်ဗျ...၊
တင်ပါ့ဘုရား၊ ဦးဇင်းလည်း ကျန်းမာပါစေ...၊
I am so flattered by your kind words and don't feel gravitational force any more....ha ha. Thanksalot!
စုံစေ့အောင်သာ မြည်းပါဗျား၊ လာလည်တာလည်း ကျေးဇူးပါနော်...။
ကိုညီလင်းက ပာင်းချက် တော်လိုက်တာ။ ပုဇွန်ပာင်းလေး ချက်ထားတာ အနှစ်လေးတွေ ကြေပြီး ဆီပြန်နေတာပဲ။ စားချင်တာ။ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်လည်း ကြိုက်၊ မြင်းခွာရွက်သုပ်လည်း ကြိုက်ပဲ။ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ထားတာပါ လှတော့ ပာင်းတွေ အားလုံး ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်။ မအိမ်သူနဲ့ သားသားတော့ မြန်မာပာင်း ကောင်းကောင်းလေးတွေ စားရတာပေါ့။ ကောင်းတယ်း)
ရှယ်ပါပဲ။ ကန်းဇွန်းရွကါကြော်နဲ့ မြင်းခွာရွက်သုပ်
မြင်း ခွာရွက်သုတ် မြန်းသွားတယ် ဂလု...
ကျေးဇူးပါပဲဗျာ၊ ကျနော် ချက်တတ်သလောက်လေး ထဲက ကြိုးစားပြီး လုပ်ကြည့်တာပါပဲ၊ လာအားပေးတာ လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ၊
DPD နဲ့ ပို့လိုက်မယ်လေ၊ သိပ်မှ မဝေးတာ...၊း)
မည်ကာမတ္တ ပါပဲဗျာ၊ မြန်းသွားလို့ များများ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျို့...။
စာရေးကောင်းသလို ဟင်းချက်လည်းကောင်းလိုက်တာ :)
လာလည်တာရော ကွန်မန့်အတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်ဗျာ..။
လာလည်ပြီး ဟင်းတွေကို သေချာမြည်းသွားပါတယ်ဗျာ .. နေ့တိုင်းရှိနေတဲ့ ဒီဟင်းတွေ နေ့တိုင်းလာမြည်းပါမည် .. ပြီးတော့ ကွန့်မန့်တွေကိုတော်တော်ဂရုစိုက်တယ်ဗျာ .. လေးစားစရာပဲ . ပို့စ်တွေ ဖတ်ပြီးရင် ကွန်းမန့်တွေကိုပါ လိုက်ဖတ်ဖြစ်မိတယ် .. ကျေးဇူးပါ